ओलीलाई सर्वाधिकार दिने निर्णयमा भीम रावलकाे आक्रोश : ‘फलानोले प्रस्ताव गरे हुन्छ भनेर अब विधानमा लेखौं’ – Khabarhouse
ओलीलाई सर्वाधिकार दिने निर्णयमा भीम रावलकाे आक्रोश : ‘फलानोले प्रस्ताव गरे हुन्छ भनेर अब विधानमा लेखौं’
Khabar house | ११ मंसिर २०७८, शनिबार १५:०२ | Comments
चितवन। नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनको बन्दसत्रले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वाधिकार दिने निर्णयमा उपाध्यक्ष भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन्। महाधिवेशनको बन्दसत्रले अध्यक्ष ओलीलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्य छान्ने अधिकार प्रदान गरेपछि उपाध्यक्ष रावलले फरक मत राखेका हुन् ।
उनले राष्ट्रिय महा धिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने विधानको व्यवस्थावि परितको निर्णय भएको बताएका छन् । विधानले महाधिवेशनबाट कमिटी छान्न निर्देश गरेकाले सोही अनुसार निर्णय हुनु पर्ने बताए । उनले विधानको धारा १६ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने भनिएको स्मरण गराउँदै अब उप्रान्त निर्वाचन नगर्न चुनौति दिए। ‘यस्तो हो भने अब उप्रान्त निर्वाचन हुँदैन, फलानोले प्रस्ताव गरे हुन्छ भनेर विधानमा लेखौं,’ उनले भने।
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको अधिकार हनन गरी यस्तो निर्णय गर्दा लोकतान्त्रिक परिपाटी अन्त्य हुने रावलको भनाई छ । महत्त्वपूर्ण महाधिवेशनमा यस्तो कुराले प्रवेश गर्नु उपयुक्त नभएको उनले बताए। ओलीलाई उक्त अधिकार दिने प्रस्ताव विष्णु पौडेल गरेपछि हलले समर्थन जनाएको थियो। रावलले आफूले १० औं महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको र सोही अनुसार उम्मेदवारी दिने पनि बताए ।
जनगणनामा कालापानी क्षेत्र पनि समेटियो, कालापानीकाे ६ सय
थप ८ हजार १७ जनामा को’रोना पुष्टि, १५ जनाको नि’धन !
धुर्मुस-सुन्तलीले बनाउन नसकेको क्रिकेट रंगशालामा खेलकुद मन्त्रीले गरे अनुगमन
चीनमा हुने ओलम्पिककी पोस्टर ग’र्लको विवाद के हो ? किन अमेरिका छोडेर चीनकी बनिन् ?
१ करोड ६३ लाख मूल्य बराबरको सामान सहित ट्रक नियन्त्रणमा
तनहुँको निर्मल माविलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय अवार्ड